Ngokuqhelekileyo, ukunyuka kwitheyibhile yokuzonwabisa, siziva sisigcwele kwisisu. Yaye le ntliziyo ayizange isishiye ixesha elide. Nangona kunjalo, sizama ukubamba iingxaki ezincinci nezikhulu, ukuqala ngamacandelo amancinci, uze uzalise umzimba wonke ngokutya, kunye nalo bunzima obuninzi, obangela ukuba uzive udidekile kakhulu.
Isifo sengqondo saseFransi kunye nesifo sengqondo uGerard Apfelldorfer, onguchwepheshe weengxaki ezinxulumene nolwalamano lomntu ekudleni, uphuhlise i-day-day technique, ekufuneka ilandelwe kulo lonke ubomi ukuze kuphephe iingxaki nge-catarrh.
Ukuqwalaselwa kokumodareyitha kwondlo ngumgangatho wemihla ngemihla yokuziphatha kunye nendlela yokuphela kokutya izitya ezikhuni, ukulandelana kwemigudu kunye nezinye iinzame zokulahlekelwa kwindleko yokukhawuleza, okuthe ngandlela-thile ekupheleni kwimizuzu elandelayo, kwaye ngamanye amaxesha ikhefu elibalulekileyo leekhilogram ezingaphezulu.
Ukumodareyitha kwindlela yokutya ukwazi indlela yokuziva iimfuno zinyani, ukukwazi ukubuyisana nomzimba wakho, ukufunda ukuhlula ukulamba kwengqondo kwimizimba.
Into yokuqala okufuneka ufunde ukuzivakalelwa kukuba ukwazi ukubona umahluko okhoyo phakathi kweentlobo ezimbini zendlala kunye nendlela yokuzalisa indlala. Ngokufanelekileyo, imfuneko yokufumana umlinganiselo phakathi kweemfuno zangempela zomzimba kunye neemvakalelo ezivela ngexesha lokutya.
Indlela yeGerard Apfeldorfer yinto yokuqala ukuba kufuneka ahlolisise iimvakalelo zakhe kwaye afunde ukuyiqonda.
IQumrhu lokuqala - indlala
Zama nantoni na into yokutya malunga neeyure ezine. Akukho nto iya kwenzeka. Kungenzeka ukuba awuyi kulambile. Kwaye kutheni? Mhlawumbi udlile ngaphambi kokuba, okanye mhlawumbi ulahlekelwe ukudibana nomvakalelo onjalo njengento yokutya kwakho? Ukuba kukho umnqweno wokudla into, kwaye oku kuqhelekileyo kuwe, kuthetha ukuba awuqondi umlinganiselo phakathi kokulamba komzimba kunye nomzwelo omnye.
Intloko, ubuthathaka, umoya ombi kunye nesiginci esivela esiswini sakho yindlala yenyama. Ukuba uvile ezi zibonakaliso, ke le yimeko yempilo. Zama ukugxila kubo kwaye uzikhumbule.
IBhunga lesiBili - sifunda ukuphuhlisa isakhono
Into elula kule shishini iya kuba yinkqubo eqhelekileyo yekhamera. Injongo yakho mayibe kukuseka umyinge we-saturation, kwaye kungekhona ubugcisa ukwenza ukutya okuhlukahlukeneyo. Ngenxa yale nto, ukutya kufuneka kuthathwe ngokungqongqo ngelixa. Emva kwexesha uqale uqaphele ukuba ukuziva kwakho indlala kwaqala ukulungelelanisa nolawulo. Kwaye ngoku kubaluleke kakhulu ukuba ufunde indlela yokuvakalelwa ngayo, kwaye ke, ukuba ungadli kakhulu.
IBhunga lesithathu - siyakuthatha
Sisoloko singadli okwangoku, kodwa siyidla ingcamango. Kubonakala ukuba inxalenye enkulu yekhekhe le-chic nge-white lily phezulu-lo ngumda wamaphupha kunye noonwabo. Kodwa ngokwenene kuvela ukuba xa uhlafuna ngokukhawuleza, ngelixa uphulaphule ukuqonda kwintetho (ulwimi, isibhakabhaka, amazinyo), uya kusela ukuba udle ikhekhe eqhelekileyo, kwaye udle kakhulu ezimbalwa. Yintoni enye into enkulu?
IBhunga lesine - thatha ixesha lakho
Isibonakaliso sokuba uzele, asifiki ngokukhawuleza, kuba le mzimba idinga malunga nemizuzu eyi-15-30. Khawucinge nje ukuba ungaphi ukutya okungakumbi kwisiqingatha seyure, kwaye ukuba udla ngokukhawuleza? Funda ukukhawuleza nokuthandeka, ukuze kube yindawo yokuzola. Ukuba ungenayo ixesha elaneleyo lokutya, ungadli uninzi, zama ukuphuma kwirevenkile, uzive ulamba. Uvakalelo lokuzalisa luya kufika kamva kamva.
I-5 yeBhunga - ikhefu
Kucetyiswa ukuba uyeke kwaye uphulaphule iimvakalelo zakho - ngaba kungenzeka ukuba usuzalisekile? Nasi isixa se-five point point, ngokweziphi na ukuvavanya urhulumente omtsha:
Ndifuna nje ukutya.
Ndiyakumisa ngoku ngoku.
Andive ndilambile, kodwa kusekho igumbi lam esiswini.
Okwangoku, ndiza kuphuma.
Yeka ukuba uqaphela ukuba uzele-kuyimfuneko nje. Ewe, kutheni ndifuna ukutya? Emva koko, ungayidla kusasa.
Ukuba sele usudlile, ungakhathazeki, ukuba uzive ulambile, kuya kuthatha ixesha elide.
IBhunga lesithandathu - jolisa ukutya
Funda ukufumana uvuyo lokuba khona kwisidlo. Yisebenzise kakuhle itafile. Musa ukudibanisa isidlo kunye ne-movie okanye ukufunda. Uyakwazi ukuthetha etafileni ngokukhawuleza, kodwa kungekho ngaphezulu.
I-7 yeBhunga - yi-moderation
Ukunciphisa iintlobo zezitya. Kungcono ke ngoko, xa uvakalelwa kukuba uzele, faka okungakumbi kunokutya ngokuzenzekelayo isabelo esikhulu. Ukuba uceba i-party dinner, yenza ikhefu elincinane phakathi kweesitya. Itafile ye-buffet, kunye nogogo bazintande zokumodareyitha, bazama ukuzityhila bona kunye nazo zonke izihlobo ngokukhawuleza.
IBhunga lesibhozo - Hlaziya iinqwelo
Ngaba uvuyo? Okanye unomdla? Mhlawumbi kuphazamise into ethile? "Isandla ngokwawo sifinyelele i cookies okanye ithokoleta. Ngaba ulambile ngokwenene? Bese uyidle. Kwaye ukuba akunjalo, zama ukuxazulula iingxaki ngaphandle kokutsala ukutya. Zithintele emanzini okanye uthethe nomntu osondeleyo kuwe, zama ukujonga ingqalelo kwi-movie okanye kwincwadi. Ukuba ufuna ngokwenene ukuyidla, yidla, kodwa incinci kakhulu.
IBhunga lesithoba - ungadli ukusetyenziswa kwexesha elizayo
Abantu abaninzi abangaqinisekanga ngomso baya kuyidla ngokusetyenziswa kwexesha elizayo. Kodwa ngomso uza kubuya kwakhona usuku olutsha, kwaye kufuneka ukwazi ukuhlala namhlanje, okanye kunoko, okwangoku, kwaye ungenzi ukuthunjwa kokutya.
IQumrhu leShumi - fumana iimfuno zakho
Awulambile nonke, kodwa ke kutheni udla? Awufuni ukuba ngumntu? Okanye ngenxa yokuba umntu uthe into enhle kakhulu? Musa ukutyhilela nawuphi na umntu kule miba. Into ephambili kuwe yimvakalelo yakho, kungekhona abantu abangaziwa. Ukuba namhlanje unomnqweno wokutya okuninzi - unokuzinokuzixazulula oku ngokwakho, nje kuphela. Ngomso mhlawumbi unokuzigcina uziphethe ngesandla.
Unokuzuza njani ekudleni iimveliso ezinobungozi
Indlela yokuba ngumqolo obomvu ekhaya: zokupheka ezenziwe ngamathena e-henna
Ziziphi izifo zentliziyo nemithambo yegazi?
I-snack e-spicy evela kwi-pepper
I-Physiognomy: yintoni ukuma kwamehlo, impumlo, indlebe kunye nomlomo